Ozi HTC: Launch, ekwentị, mbadamba, mgbọrọgwụ na ndị ọzọ - Androidsis | Gam akporo (Peeji nke 2)
HTC ga-ebido ekwentị 5G mbụ ya na 2020
Chọpụta ihe gbasara mmalite ahịa nke ekwentị mbụ nke ekwentị 5G nke ga-abụ onye ọrụ na 2020 dị ka ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara n'onwe ya.
Chọpụta ihe niile gbasara HTC Wildfire X, ekwentị ọhụụ ga-ebido na India ma gosipụta ya na nzuzo.
Ọ dị ka anyị ga-enwe HTC ogologo oge na-abịa. Akụkọ ọhụrụ na-egosi na ọ ga-arụ ọrụ n'oge na-adịghị anya na ahịa India.
Ationsfọdụ nkọwa nke HTC Wildfire X pụtara: Helio P22 ga-abụ injin nke ekwentị a
HTC Wildfire X bụ ama ọzọ na-abịa na ngalaba mmefu ego n'oge na-adịghị anya. SoC nke ọ ga-akwadebe ga-abụ Helio P22 si na Mediatek.
HTC Wildfire na Wildfire E1: Nkọwapụta na Leaked Rendered Images
HTC ga-ebupụta ngwaọrụ ọhụrụ anọ n'oge na-adịghị anya. Abụọ n'ime ha bụ Wildfire na Wildfire E1, ma lee nkọwa ha niile.
HTC ga-ewepụta ụdị anọ nke oke ọhịa
Chọpụta karịa gbasara atụmatụ HTC maka ịtụte nso ya Wildifire, nke ga-enwe ụdị anọ na mkpokọta ma rụọ ọrụ n’oge na-adịghị anya.
Nkọwapụta na leaked oyiyi nke HTC Wildfire E na Wildfire E Plus bụ ebe a
Ihe osise izizi nke HTC Wildfire E na E Plus apụtawo na njirimara ha na nkọwapụta teknụzụ ha.
HTC U11 + na-anata mmelite na gam akporo achịcha
Achịcha achịcha mechara dị maka HTC U11 +, ama dị n'etiti etiti amaara arụ ọrụ na njedebe nke 2017.
HTC Wildfire E, ịga n'ihu nke usoro ochie nke smartphones
N'oge na-adịghị anya, anyị nwere ike ịnata HTC Wildfire E si HTC, ekwentị mkpanaaka nke ga-agbake usoro ochie nke ekwentị Taiwanese.
HTC U12 + na-emesị nweta gam akporo
Dị ka HTC kwere nkwa ọtụtụ izu gara aga, HTC U12 + na-enweta mmelite na gam akporo Pie.
HTC U19e na HTC Ọchịchọ 19 +: Ọdịdị ọhụrụ nke ika ahụ
Chọpụta ihe niile gbasara ekwentị ọhụrụ sitere na HTC, HTC U19e na HTC Desire 19+ nke ekpughelarị n'ihu ọha.
Aa ntị na ihe omume nke HTC kwadebere maka June 11 a
Ekwentị HTC ọhụrụ ga-ebido na June 11 a na mmemme nke ụlọ ọrụ Taiwanese kwupụtara site na akwụkwọ mmado.
Nwa oge wepụrụ mmelite a gam akporo achịcha nke HTC U11 n'ihi nsogbu
Chọpụta ihe banyere nsogbu ndị HTC U11 nwetara na mmelite gam akporo nke dugara na ezumike nka nwa oge.
HTC U11 na-emesị nweta mmelite na gam akporo achịcha
!! Ekele !! HTC U11 na-anata mmelite ahụ na A gam akporo. Nke a na-abịa na nnukwu mgbanwe na ndozi.
Choputa ihe banyere nkpebi nke HTC ịkwụsị ire igwe ya na ufodu ulo ahia kachasi na China, dika ha kwuputala.
HTC kwupụtara ekwentị mbụ ya n'afọ a
Chọpụta ihe banyere ekwentị mbụ nke HTC na-ebupụta n'afọ a, nke ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtalarị.
Anyị amaworị mgbe HTC U11, U11 + na U12 + ga-emelite na gam akporo 9 Pie
Firmlọ ọrụ Taiwanese kwadoro na HTC U11, U11 + na U12 + ga-enweta Android Pie n'oge na-adịghị anya. Anyị na-agwa gị nkọwa niile.
Chọpụta karịa maka nsonaazụ dara ogbenye nke HTC nke laghachiri iji wepụta nde mmadụ nde na ọnwa Eprel wee gaa n'ihu na oge ọjọọ ya.
HTC nwere ekwentị dị n'etiti etiti ọhụrụ na mmepe. Ọ pụtara na akara Geekbench n'okpuru akara ngosi '2Q741'.
HTC na-akwadebe onye ga-anọchi Ọpụpụ, ama ama nke ụlọ ọrụ mbụ nwere sistemụ blockcheni iji chebe data anyị.
HTC wepụrụ ngwa si Play Store abụghị n'ihi a ụlọ ọrụ na-echeta
The Taiwanese emeputa HTC, o yiri ka ị nweghị ọdịnihu atụmatụ ịwepụ na ekwentị mkpanaaka mpi, n'agbanyeghị na ọ napụrụ iche iche ngwa si Play Store.
HTC na-enye ihe atụ nke ndụ ma debanye aha ihe omimi dị n'etiti AnTuTu
Modeldị ọhụrụ sitere na HTC na-abịa. Nke a pụtara na ibe AnTuTu Weibo, na-ekpughe ụfọdụ nkọwa na akara akara ya.
HTC nwere ike ịmalite ekwentị 5G n'afọ a
Chọpụta karịa gbasara atụmatụ HTC maka ịmalite 5G smartphone afọ a banyere nke anyị maaraworị ihe.
HTC kwadoro mgbe HTC U11, U11 + na U12 + ga-enwe gam akporo achịcha
Chọpụta karịa maka ụbọchị emelitere gam akporo gam akporo HTC U11, U11 + na U12 + dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwadoro.
HTC na-eme atụmatụ inye ikikere ikike ya
Chọpụta ihe banyere atụmatụ HTC maka inye ikikere ikike iji mepụta ya ka ọ nwee ike ịpụ na ọnọdụ akụ na ụba ọjọọ ya maka ọdịnihu na India.
Nwere ike ịzụta HTC Ọpụpụ na ezigbo ego
Chọpụta ihe banyere mgbanwe HTC na atụmatụ nke ga-enye ohere ịzụrụ ụdị Ọpụpụ ya na ezigbo ego site na Machị.
HTC na-emechi afọ ọzọ na ọnwụ
HTC na-aga n'ihu na-enwe oge dị njọ na nke asaa nke afọ na-esochi ha na-emechi afọ ahụ na nde ndị nwere nde ego na-egosi oge ọjọọ ha.
HTC ilekwasị anya na ekwentị ndị dị elu na ọkara nke mbụ nke 2019
HTC kwadoro na ọkara nke mbụ nke afọ 2019, mgbalị ya ga-elekwasị anya na mbupụta ama ama dị elu.
HTC Ọchịchọ 12s: HTC ọhụrụ n'etiti-nso
Chọpụta ihe gbasara nkọwa nke HTC Desire 12s, ekwentị ọhụụ maka etiti etiti nke egosipụtagoro n'ihu ọha.
HTC ga-aga n'ihu na-ebupụta ekwentị mkpanaaka na 2019, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị iche
2019 ga-abụ afọ ọzọ maka HTC nwere mobiles ọhụrụ dịka atụmatụ ha si dị. Otu ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-enwe oge siri ike, ọ bụ ezie na ọ ga-anọgide na-ekwusi ike.
HTC mara ọkwa na a gaghị enwe HTC U13 +
Chọpụta karịa maka nkwenye na agaghị enwe ihe ọhụụ ọhụụ na njedebe dị elu nke HTC maka afọ ọzọ.
HTC Ọpụpụ: ọhụrụ Taiwanese blokchain ekwentị
HTC Ọpụpụ bụ onye ọrụ. Mụta ihe niile gbasara ekwentị mkpanaaka nke ụlọ ọrụ dabere na blockchain iji chekwaa cryptocurrencies n'enweghị nsogbu.
HTC's blockchain smartphone nwere ụbọchị ngosi
HTC Ọpụpụ enweworị ụbọchị ngosi ngosi. Chọpụta karịa banyere mbata ekwentị akara ngosi ahụ ga-ekpughere na ọnwa a.
HTC U12 Ndụ: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Chọpụta ihe niile gbasara etiti ọhụrụ sitere n'aka ndị nrụpụta Taiwan.
A na-emelite HTC U12 + site na ịgbakwunye mbugharị na-arụ ọrụ na arụmọrụ ọhụrụ
HTC's flagship ọnụ maka afọ a, HTC U12 + amalitela ịnata mmelite ọhụrụ nke na-eme ka mbugharị akpaka na ọnọdụ vidiyo.
HTC na-ewepụ 22% nke ndị ọrụ ya
Firmlọ ọrụ Taiwan bụ HTC ekwuputala na ha erutela nkwekọrịta ịhapụ 22% nke ndị ọrụ ya n'ụwa niile.
HTC U12 +: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Chọpụta ihe banyere ọkọlọtọ ọhụụ ọhụrụ nke ndị Taiwanị ekpughere taa.
HTC U12 +: Nhazi na nkọwapụta dị n'ihu ngosi. Choputa ihe banyere ohuru ohuru ohuru a ga-eweputa n’izu na-abia ma mara ihe omuma a.
HTC Ọpụpụ: Ekwentị Blockchain Ekwentị
HTC Ọpụpụ: Ekwentị mbu Blockchain na-abịa n’afọ a. Chọpụta ihe gbasara ekwentị izizi ika ahụ iji kụọ ahịa n’afọ a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi ekwentị gị na akwụkwọ ahụ aja ọhụrụ nke HTC U12 +, n'isiokwu a anyị na-enye gị ohere ibudata ha tupu ọnụahịa ahụ egosipụta na ahịa.
HTC Desire 12 na Ọchịchọ 12 +: Ekwentị Mgba Ọhụụ Ọhụrụ
HTC Desire 12 na Desire 12 +: Nkọwapụta, Ọnụahịa, na Mwepụta. Choputa ihe banyere etiti ohuru nke akara Taiwan nke ekpughere ugbua
HTC Chepụtara ụdịdị ekpughere
Leaked nkọwapụta nke ọhụrụ HTC Cheedị. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ dị elu nke ga-ebido na Eprel.
Anyị na-agwa gị niile leaked nkọwa nke HTC U12
Nkọwapụta ebubo nke HTC Desire 12 Plus, ụdị ndị okenye ochie nke Ọchịchọ 12, bịara pụta ìhè
Naanị awa ole na ole gara aga, ọtụtụ nkọwa na atụmatụ nke HTC Desire 12 Plus bịara pụta ìhè, ụdị dị ike nke Desire 12 nke ga-abịa na ihuenyo 5.99-inch, SD450, 3GB RAM, na ọtụtụ ndị ọzọ. Anyị na-agbasawanye gị!
HTC U12 Plus bụ njedebe dị elu nke ekwurularịrị ntakịrị banyere njirimara na nkọwa nke ọ nwere ike ịbịaru n'etiti afọ a. Dabere na nkwụsị ọhụụ, zuru oke, ọ ga-abata na Snapdragon 845, 6 / 8GB nke RAM, ihuenyo 6.1-inch, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọtụtụ isi atụmatụ nke HTC Ọchịchọ 12 leaked dị ka ya igbe
N'oge na-adịbeghị anya, agbapụtara njirimara na nkọwa nke HTC Desire 12, ọnụ nke ga-adị na katalọgụ nke ụlọ ọrụ dị ka obere etiti / ala dị ala na, ọ bụ ezie na ọ nweghị atụmatụ dị ike, ga-achọ oghere nwere imewe nwere ike ịdị ka HTC U12. Anyị na-agbasawanye gị!
HTC U11 anya: Ebe etiti ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Taiwanese
HTC U11 Anya: Nkọwapụta na onyonyo nke ọhụụ ọhụrụ. Choputa ihe ndi ozo banyere ohuru ohuru nke Taiwanese nke enyere na Mọnde a.
HTC na Motorola adịghị akwụsịlata arụmọrụ nke mobiles nwere batrị ochie
HTC na Motorola na-ekwu na ha anaghị ebelata ekwentị ha ochie. Chọpụta ihe banyere nkwupụta nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ mgbe nsogbu Apple gasịrị.
Ebube nke HTC Ocean: Egosiputara nkọwa. Chọpụta ihe banyere ekwentị HTC ọhụrụ ahụ na-akụ ahịa na 2018.
HTC U11 Ndụ: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Chọpụta ihe ndị ọhụrụ HTC mid-nso na ezi ụdịdị.
Anyị amatala nkọwa nke HTC U11 Life with Android One
Mụta maka nkọwa nke HTC U11 Life, HTC ọhụrụ ekwentị dị n'etiti etiti na-agba ọsọ na gam akporo Otu dị ka sistemụ arụmọrụ.
Akpa nsụgharị na nkọwa nke HTC U11 Plus na-esote
HTC ga-eweta ọhụụ ọhụrụ U11 Plus ya na November 2, mana ugbu a, ihe osise izizi nke ekwentị na-esote apụtawo.
HTC U11, ihe ngosi mbụ
Mmetụta izizi na vidiyo mgbe anwalechara HTC U11 na IFA na Berlin. Ekwentị nwere ihe okike puru iche nke ga-adọta anya niile.
HTC kwadoro na HTC U11 na gam akporo 8.0 ga-enwe Bluetooth 5.0
Ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ nke Google, gam akporo 8.0 "O", ga-akwado nkwado maka Bluetooth 5.0 na ngwaọrụ ndị ahọpụtara, gụnyere HTC U11.
HTC U11 ga-agụnye Bluetooth 5 na mmelite ngwanrọ na-abịa
HTC ga-ewepụta nwelite ngwanrọ maka HTC U11 nke ga-agbakwunye ndakọrịta na Bluetooth 5 na-enweghị mkpa ịgbanwe ngwaike ahụ
Nke a bụ agba ọhụụ dị maka HTC U11, ị ga-ahụkwa ya n'anya
Firmlọ ọrụ HTC siri ike mepee ndoputa nke HTC U11 Solar Red mbipụta na United States, naanị ụbọchị mwepụta nke OnePlus 5 ga-ekwe omume.
Nke a bụ ihe ọhụrụ HTC U11, maara ma akwụkwọ ọgụgụ
Gosiri na HTC U11 ọhụrụ mere nke iko, maara nke ọma ma akwụkwọ akụkọ, ike, na-eguzogide ọgwụ na igwefoto kachasị mma
HTC U 11 ga-egosipụta ndekọ 360-edekọ
Ọkọlọtọ HTC na-esote, a na-akpọ HTC U 11, ga-enwe ike ịdekọ ogo 360, dị ka teaser ọhụrụ si ụlọ ọrụ ahụ.
A na-enyocha njirimara teknụzụ nke HTC U 11 niile
A na-agbapụta igbe mkpọsa maka HTC U 11 na nso nso a wee weta ihe ngosipụta teknụzụ niile nke ọhụụ ọhụrụ nke HTC.
HTC na-ebipụta vidiyo teaser ọhụụ maka HTC U 11
HTC egosila ihe ngosi vidio ọhụrụ nke ọkọlọtọ ya na-esote, HTC U 11, onye nhazi ya ga-eme na May 16.
A ga-eweta HTC U na Mee 16
HTC Firm ọkwa na-ekpughe ya Next Flagship, Pressure Mmetụta Akụkụ ụba U U maka May 16
A ga-akpọ ọkọlọtọ ọdịnihu nke HTC U Ocean na ọ na-abịa n'oge na-adịghị anya. Anyị na-ekpughe njiri mara ya na foto izizi nke ọnụ.
Nke a bụ HTC One X10 nke e rere na Russia
Anyị amaworị nkọwapụta teknụzụ nke HTC One X10 ọhụrụ ahụ, nkọwapụta teknụzụ nke ọ na-ekerịta na ọdụ China nke ruru 200 Euro.
Sapphire kristal HTC U Ultra ga-amalite na Europe na Eprel 18
HTC kpebiri ire ahịa ọhụụ HTC U Ultra ya na sapphire crystal dịkwa na Europe. Ọnụahịa ya ga-abụ euro 849 wee rute Eprel 18.
HTC nwere ike ịkwadebe ọhụụ ọhụụ ọhụụ. HTC Edge?
HTC Edge ma ọ bụ HTC Sense Edge, gịnị ka HTC interface interface na-egosi anyị? Interface ọhụrụ ma ọ bụ ụdị ọhụụ ọhụụ?
Nke a bụ HTC One X10, ama nso-ọkwa larịị ama
Ebumnuche nke HTC X10 bụ ahịa dị iche iche nwere ọtụtụ atụmatụ na onyogho anyị na-enye ugbu a iji zute gị.
Leak ekpughe Snapdragon 835 mgbawa na 6GB nke Ram maka HTC 11
Ihe ohuru ohuru na-etinye anyị n'ihu ụfọdụ nkọwa dị mkpa nke HTC 11 na Snapdragon 835 na 6 GB nke RAM.
HTC na-ebipụta vidiyo ebe Fans na-enye echiche ha na HTC Ultra
HTC ebipụtawo vidiyo ebe ndị na-akwado ule nyocha na nke mbụ ya bụ HTC U Ultra, ihe ijuanya maka mpempe akwụkwọ na arụmọrụ ya.
O nwere ike ịbụ na HTC ga-ewepụta ọkọlọtọ na 2017 na Snapdragon 835
HTC achọghị ka ahapụ egwuregwu ahụ Samsung gara aga, ọ dịkwa njikere ichere maka mgbape Snapdragon 835 na HTC 11
HTC ọzọ kwụsịrị nkenye nke gam akporo Nougat na HTC 10
Dị ka Sony na ZTE, HTC aghaghị ịkwụsị ụzọ nkwalite Nougat gaa HTC 10 ọhụrụ ya.
Ọ bụ ihe omimi ihe ngwaọrụ a weara nke gafere FCC na nke nwere HTC Vive brand na ya na-ewetara onye ọ bụla ịtụnanya.
HTC One A9 mechara nweta mmelite Nougat mgbe ụbọchị 146 gasịrị
HTC ewepụtarala gam akporo Nougat 146 ụbọchị ka ekwesịrị ya na HTC A9. Igbu oge ikwubiga okwu ókè maka mgbasa ozi ị na-eji maka ọnụ gị.
Android Nougat ga-ebido ịgbanye na HTC 10 na izu 3 na-esote
Gam akporo Nougat na-enye nsogbu karịa atụ anya na ọ bụ HTC 10 nke ga-emesị nata ya na izu 3 na-esote.
HTC ga-ewepụta ọnụ ọgụgụ pere mpe nke afọ a na 2017
Atụmatụ HTC maka 2017 ga-elekwasị ọkara nke ekwentị ọ malitere n'afọ gara aga ka ha wee nọrọ n'ọnọdụ kachasị mma.
HTC ka kpughere HTC U Ultra na HTC U Play, ekwentị abụọ nwere nkọwa dị iche iche na ọbụlagodi ihuenyo nke mbụ.
Ihe ngosi HTC Ocean ga-eji otu igwefoto dị ka Google Pixel nwere mgbakwunye ndị ọzọ
Eziokwu a pụtara na ikekwe Osimiri HTC Ocean nwere ike ịgafe ogo nke ọmarịcha foto nke Google Pixel.
The HTC U ga-elekwasị anya na nhazi dị ka vidiyo na-ekpughe
HTC doro anya na afọ a ọ chọrọ ilekwasị anya na nhazi nke enwere ike ịnye na njedebe ndị ọ na-ebupụta.
Enwere ike ịkpọ HTC Ocean Note U Ultra
Na Ultra, ma ọ bụ nke a na-akpọ Ocean Ocean, bụ otu n’ime ekwentị atọ nke HTC ga-eweta na Jenụwarị 12 nke ga-anọdụ na oghere nke Note 7.
HTC Ocean Note ga-abịa n'oge na-adịghị anya na nnukwu ihuenyo na igwefoto, mana na-enweghị ọdịyo
HTC na-ahụ Ocean Note dị ka ngwaọrụ dị elu nke ọ na-atụ anya karịa Google Pixels na ihuenyo na foto.
HTC nwere ihe echere maka Jenụwarị 12
HTC kesara onyonyo teaser nke ihe omume Jenụwarị 12 nke ọ kpọrọ "maka U" (maka gị) na Bekee.
Igodo nke HTC 11, ma ọ bụ akpọrọ n'ime obodo HTC Ocean
HTC 11 nwere ike ịpụta tupu na mgbe ọ bụla maka ụlọ ọrụ Taiwanese ma ọ bụrụ na ọ nwere ike iku ume ikuku ọhụrụ nke Google Pixel na-eku ume.
Versionsdị ndị a na-emegheghị nke HTC 10 na-amalite ịnata gam akporo Nougat
HTC 10 malitere ịnabata mmelite a gam akporo Nougat nke ndị nrụpụta ndị ọzọ ka nwere na beta.
E gosipụtara HTC Desire 650 site na iji 'njigide' na azụ
Na azụ nke HTC Desire 650 enwere nkọwa iji banye na akaụntụ maka ndị ekwentị mkpanaka na-amị amị dị mfe: ọdịdị ya siri ike.
HTC 10 evo kwalitere ụwa, enwere ike ịzụta ya n'ịntanetị
Emepụtara HTC Bolt izu abụọ gara aga na United States naanị na Sprint, onye na-ebu ụgbọelu America. Ugbu a, a na-emepe HTC 2 evo.
The HTC Bolt, ọhụrụ nanị ekwentị na United States
O yiri ka ọ nwere obere Snapdragon 810 ibe fọdụrụ na ha, o mere HTC Bolt dị naanị na United States.
Taa, m na-egosi gị otu esi eme ka gam akporo gị bụrụ HTC site na ịwụnye HTC Sense 7 yana Blinkfeed zuru oke yana ngwa ọdịnala niile nke HTC.
HTC Ocean ga-abụ nnukwu nzọ nke HTC ga-abụ onye ọzọ n'ụwa nke smartphones
N'ikpeazụ ịdị adị nke HTC Ocean na-egosi, ọhụrụ ọnụ na HTC na-akwadebe ọzọ otu onye na nke a nke smartphones.
Nke a bụ HTC Bolt nwere ihuenyo 5,5 ″ 1080p, 3GB nke RAM na enweghị ụda ọdịyo
HTC na-aga n'ihu ịkụ nzọ siri ike ma na-aga n'ihu na-eme ihe ya iji wepụta smartphones ọhụrụ dịka nke ọhụrụ HTC Bolt nke anyị nwere onyogho ọhụrụ
Ihe oyiyi nke HTC Halfbeack smartwatch na Wear gam akporo na-agbapụ
Ihe oyiyi abụọ nke ihe ekwesịrị ịbụ gam akporo Wear smartwatch si HTC na n'okpuru Armor agbapụla na Weibo, netwọkụ mmekọrịta ndị China.
Ọzọ gam akporo ama na-enyefe na ihe ntanetị, ihe ọhụrụ HTC Bolt
The HTC Bolt bụ ihe ọzọ dị na ngwụcha ngwanrọ nke gam akporo ga-eweta site na ngwepụta nkwupụta ụda nke ọkọlọtọ nke ọgụgụ ka ukwuu nke ekwentị taa.
Chọrọ 10 Pro na ọchịchọ 10 Web, ihe ọhụrụ sitere na HTC
HTC na-ekwupụta ọkwa ọhụụ ọhụrụ ya, HTC Desire 10 Pro na HTC Desire 10 Web, mara ọdịiche dị n'etiti ha abụọ.
HTC na-ekwupụta ụdị ndụ 10 chọrọ na ngosi 5,5 ″ HD, 3 GB nke RAM na 4G LTE
HTC ga-ebupụta ụzọ abụọ dị na RAM na ebe nchekwa dị n'ime ndụ Ọchịchọ Ọchịchọ ọhụrụ 10 yana ihuenyo 5,5 "HD. Ekwentị profaịlụ dị ala karịa Desire 10 Pro
HTC Desire 10 Pro kwupụtara na ngosi 5,5 ″ 1080p, 4GB RAM na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka
HTC ka kwuputara Desire 10 Pro na ihuenyo 5,5-inch, 4GB nke RAM, yana ihe mmetụta mkpịsị aka. Anyị amaghị ụgwọ.
HTC iji kwupụta Ọchịchọ ọhụrụ 10 izu na-abịa
HTC enweworị ihe omume emere maka Septemba 20 maka ọkwa nke ọhụụ ọhụrụ ya abụọ, ụdị ọchịchọ 10 na Desire 10 Pro.
HTC na-ekwuwa ọbịbịa nke ọhụụ ọhụụ ọhụrụ
A ga-eji akara Ọchịchọ ọzọ na ekwentị ọhụrụ abụọ ga-adị iche na nkọwapụta: Web na Pro.
HTC na-ekpughe One A9s nwere ihuenyo 5-inch 720p na mgbawa Helio P10
HTC na-eweta ihe ịga nke ọma na A A9s nke afọ gara aga na One A9s, ekwentị nke na-apụ apụ na 5,5 "ihuenyo na Helio P10
HTC Ọchịchọ 10 Pro nkọwa Leaked; ekpughe a flagship device
Onye na-emepụta Taiwanese na-achọ ụzọ iji belata ahịa dị ala nke HTC 10 yana HTC Desire 10 Pro nwere ike ịchọta taa.
HTC kwadoro ụbọchị maka mmelite gam akporo Nougat
HTC na-ezube ịmalite mmelite a na Nougat maka nkeji iri na ise nke afọ a na mpaghara atọ nke njedebe ya: HTC 10, One M9 na One A9
Onye na-emepụta Taiwan enweghị ike iwepụta ngwaahịa nke ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa nwere mmasị, ọbụnadị na HTC 10.
Dị ka ihe ncheta, HTC zitere tweet nke ọ na-echeta na ọ ga-ebupụta gam akporo 7.0 Nougat na HTC 10, One M9 na One A9.
Peter Chou, Co-guzobere na CEO, Na-asị goodbye na HTC
Peter Chou bụ onye nchoputa na onye isi nke HTC wee mee mkpebi ịla ezumike nká n'oge mgbanwe oge site na ụlọ ọrụ ahụ.
HTC Ọchịchọ 628, ekwentị na-emesi agba
A ga-ebido HTC Desire 628 na Spain na July wee gosipụta nhọrọ na-adọrọ mmasị maka obere / ọkara dị nso ga-abụ ihe dị ka € 250.
Ihupu mmiri na-eme ka smartwatch nke HTC gbuo oge ruo mgbe ada
HTC ga-echere ọdịda maka mmalite nke smartwatch ya dị ka anyị mụtara taa n'aka Evan Blass, onye na-agbapụta ama ama.
HTC tufuru ihe dị ka 80% na ego ha nwetara ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga na nkeji iri na ise nke 2016
HTC na-ebipụta ụfọdụ nsonaazụ jọgburu onwe ya na ntinye 78% na ego ha nwetara, ọ bụ ezie na nke kachasị mma bụ na HTC 10 adịghị na ọnụ ọgụgụ ahụ.
HTC na-ebupụta Ọchịchọ 830 na Taiwan na ọnụahịa ihe dị ka € 280
Maka ihe dị ka € 280 ị nwere ike ịzụta ọnụahịa HTC ọhụrụ a, Ọchịchọ 830. Emechara na plastik, 32GB nke ebe nchekwa dị n'ime ya na 3GB RAM.
HTC One S9 enweelarị eziokwu na ihe mgbanye Helio X10 maka euro 499
HTC ekwuputala One S9 na Helio X10 mgbawa maka € 499 na nke ọ ga-aga n'ihu na ebe nchekwa 16GB na 2GB RAM. Ihe dị ụkọ maka ihe a hụrụ na mobiles ndị ọzọ
Foto nke HTC Ọchịchọ 830 na etiti-etiti nkọwa na-leaked
The HTC Ọchịchọ 830 bụ Taiwanese emeputa nzọ ka infiltrate media egwuregwu na a Mediatek mgbawa na okokụre ke plastic.
Mwakpo bot ahụ na Facebook Messenger na-abịa n'isi nso
Facebook Messenger ga - agụnye bots na mkparịta ụka na - enyere ndị azụmaahịa na ụlọ ọrụ aka ịnọ na nzuzo n'akụkụ omume ọma ndị ọzọ
HTC na-ebupụta HTC 10 na 5,2 ″ QHD ihuenyo, Snapdragon 820 mgbawa na 4GB nke RAM maka € 799
HTC ka malitere HTC 10 na 5,2 "QHD ihuenyo, Snapdragon 820 mgbawa, 4 GB nke Ram na na ego nke € 799. Dị na Spain na May.
Emechara ngosi vidiyo nke HTC 10
Otu ụbọchị mgbe mmalite nke HTC 10, vidiyo ngosi nke gosipụtara nkọwa ọ bụla nke ọkọlọtọ a abanyela.
A na-ewepụta ọtụtụ selfies ndị ejiri kamera n'ihu nke HTC 10
Site na akaụntụ Twitter, ejirila foto anọ nke onwe gị gosipụta ogo igwefoto n'ihu nke HTC 10
HTC 10 ga-enwe ụdị ntinye na Snapdragon 652 na 3GB RAM
O yiri ka HTC kwadebewo ọtụtụ ụdị nke HTC 10 ya na ntinye nke nwere mgbape Snapdragon 652 na 3GB nke nchekwa RAM
Eprel 12 bụ ụbọchị maka ngosi nke HTC 10
A ga-eweta HTC 10 n'ikpeazụ na Eprel 12 na ihe omume a ga-agbasa na ntanetị site na weebụsaịtị ya.
HTC 10 ga-enwe ihuenyo Super LCD 5 na batrị 3.000 mAh
Dabere na @evleaks, HTC ga-enwe ihuenyo Super LCD 5 na batrị 3.000 mAh, si otú a na-ewepu asịrị banyere Super AMOLED.
Ihe niile anyị maara banyere HTC 10
A ga-ekpughe HTC 10 na Eprel 19. Anyị na-ekekọrịta ozi niile anyị maara banyere ọkọlọtọ ọhụrụ a
More oyiyi nke HTC 10 na-leaked
Anyị nwere ezigbo onyonyo ọhụụ nke HTC 10, ma site na ndị akụkọ ma dị adị iji mata ọkọlọtọ nke ndị na-emepụta Taiwan nke ọma.
HTC One M10 tọhapụ ụbọchị leaked April 19
Eprel 19 bụ ụbọchị ebuputara maka HTC One M10, ekwentị echere ogologo oge nke na-echekwa atụmanya banyere onye nrụpụta a.
HTC na-ewepụta HTC One M10 Teaser ọzọ
HTC chọrọ ka ihe niile zuo oke afọ a na mwepụta nke HTC One M10. Ọ wepụtara teas ọzọ iji bulie atụmanya
HTC Vive na-ere ihe karịrị nkeji 15.000 na ihe na-erughị nkeji 10
HTC achọtala ezigbo ngwaahịa na HTC Vive site na ire nkeji 15.000 na 10 nkeji ụnyaahụ tupu ere
Nwere ike HTC ịrị elu site na ntụ ya dị ka Phoenix na kwalite asụsụ ọma na eziokwu?
Dị ka Phoenix, HTC si na ntụ bilie site na ntụ nke mebere n'eziokwu nke HTC Vive yana mmekorita ya na Valve iji laghachi n'ihe ọ bụ
HTC na-ebipụta onyonyo na-atụ anya flagship ya bụ M10
Otu M10 ga-abụ ọhụụ ọhụrụ nke HTC ma taa anyị nwere onyonyo teaser iji gosi anyị ụfọdụ n'ime ahịrị ndị ahụ
HTC kpughere Desire 530, 630 na 825 smartphones
Na MWC HTC ekpughela ọhụụ ọhụrụ atọ maka ala dị ala na etiti: Desire 530, Desire 630 na Desire 825
A ọhụrụ leaked oyiyi na-etinye anyị n'ihu HTC One M10
Anyị nwere ezigbo onyonyo ọhụụ nke HTC One M10 na-abịa site na leaker Evan Blass. Ekwentị sitere na ya.
Igwefoto nke HTC One M10 ga-enwe otu ihe mmetụta ahụ dị ka Nexus 5X na Nexus 6P yana ihe eji emepụta ọhụụ na ekwentị
Nke a nwere ike ịbụ ihe mbụ mbụ oyiyi nke HTC One M10
Enwere ndị nrụpụta pere mpe iji kpọsaa ihe ngosi ha. HTC bụ otu n'ime ha. Gịnị ma ọ bụrụ na ha adịghị ewetara ndị HTC ...
HTC nzọ na mbadamba mbata na Desire T7 nwere ihuenyo 6,9-inch
Site na GFXBench mbadamba ohuru HTD Desire T7 apụtawo nke pụtara 1 GB nke RAM na ihuenyo 6,9-inch.
Enwere ike igosi HTC M10 na Machị
Onye mepụtara Asia nwere ike ibute ọkọlọtọ ya na-esote, HTC M10, na Machị.
Ngwaọrụ HTC Nexus abụọ a nụrụ kepu kepu nwere koodu T50 na T55
Ozi ọzọ metụtara Nexus abụọ ahụ HTC ga-ahụ maka mmepe na koodu T50 na T55
HTC ga-ahụ maka ịmalite launching Nexus abụọ na 2016
Dabere na post na Weibo sitere na isi iyi a pụrụ ịdabere na ya, ọ dị ka HTC ga-ahụ maka ịmalite launching Nexus abụọ na 2016.
Iwu tupu iwu maka eziokwu nke ihe eji eme ihe HTC Vive bido na February 29
HTC Vive enweela ụbọchị ndoputa ma nke a bụ February 29. Ngwaọrụ anyị anaghị ama ọnụahịa ya mana ọ gaghị adị ọnụ ala ma ọlị.
HTC na-ekwuputa One X9 na ihuenyo 5,5 body 1080p, ahụ igwe na igwefoto 13MP na OIS
HTC One X9 bụ onye ọrụ gọọmentị ụbọchị a, Disemba 24, nke onye nrụpụta Taiwanese chọrọ ịgbakwunye ọnụ ọhụụ ọhụrụ na mpaghara ya.
Ọfụfụ ọhụrụ maka HTC: Deutsche Telekom ịkwụsị ire igwe ụlọ ọrụ maka ịda iwu patent
Ihe HTC enweghị aha. Ha guzobere circus wee too dwarfs. Onye nrụpụta Taiwan anaghị agabiga ọnọdụ akụ na ụba ya kachasị mma ma ugbu a na-enweta ọhụụ ọhụrụ: site na Jenụwarị 1, 2016, HTC agaghịzi enwe ike ire ahịa ọ bụla na onye ọrụ ekwentị mkpanaaka bụ Deutsche Telekom.
Ihe ngosi ohuru nke onyonyo na-egosi HTC One X9 na ima nma ya
Anyị amataworị na HTC nwere nkọ maka inweta ngwaahịa ya tupu oge eruo na HTC One X9 agaghị abụ onye ọzọ. Ọ bụrụ na anyị gosiri gị foto izizi nke mbụ ụnyaahụ, ugbu a ọ bụ ntụgharị nke foto foto dum na-egosi n'ụzọ zuru ezu ihe nzuzo niile nke HTC One X9.
Tọrọ kalenda nke mmelite gam akporo 6.0 M si HTC
a ndepụta na-leaked na niile HTC ngwaọrụ na-azọrọ na e-emelitere ka Andrid 6.0 Marshmallow.
Ihe oyiyi ọhụrụ nke HTC One X9 pụtara
HTC One X9 na-egosi na onyonyo na-egosi ogwe dị n'elu na azụ nke yiri nke ahụ na Nexus 6P.
HTC na-aga n'ihu ịkwalite ahịa, mana obere obere
Ọhụrụ ahịa ahịa HTC na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ emeela ka ahịa ya ka mma, n'ihi mwepụta nke HTC A9
Nkọwapụta nke HTC One X9 bịara ìhè
Site na ntanye si TENAA, anyị maara ụfọdụ nkọwa dị mkpa nke njedebe ya n'ọdịnihu, HTC ONE X9.
HTC One A9 ga-eri 699 na Spain, ọ bụghị egwuregwu na uto dị njọ
HTC na-agbapụ ọzọ na ụkwụ mgbe ọ kwusịrị ụgwọ nke HTC One A9: 699 euro. Ọnụ ego dị elu maka ekwentị dị n'etiti
HTC One X9, nke a bụ ekwentị ọhụrụ dị elu nke onye nrụpụta na-akwado
A posta e leaked egosi na imewe nke HTC One X9, HTC ọhụrụ elu-ọgwụgwụ ekwentị.
Ọnụahịa nke HTC One A9 mụbara site na dollar 100 maka mbido ya na November 7
$ 100 bụ mmụba na ọnụahịa nke HTC One A9 ọhụrụ nke ga-ada na shelf na November 7 na United States.
HTC One A9 bụzi ọrụ: 5 ″ AMOLED ihuenyo, 2 / 3GB RAM na Snapdragon 617 mgbawa.
HTC ka kwupụtara ọkwa ọhụrụ ya bụ A A9 nke na-abịa na ebumnuche nke ịbụ otu n'ime ndị nrụpụta kacha elu nke Taiwan na Krismas naanị ịtụfu nkume.
HTC nzọ siri ike, njedebe ya ọzọ agaghị enwe ihe ọ bụla ga-emere iPhone anyaụfụ
Onye isi oche nke HTC ugbu a emeela ụfọdụ nkwupụta dị egwu banyere ọdụ na-esote maka ndị na-akwado ụlọ ọrụ a.
HTC na-akwadebe 'mgbanwe ọzọ nke Otu' maka Ọktọba 20
HTC One A9 bụ mkpanaka nwere atụmatụ nwere obi umeala nke a ga-ewepụta na October 20 na New York na nke ahụ ga-enwe Tidal dị ka ọrụ nkwanye.
Ihe oyiyi mbụ nke HTC One A9 pụtara
Ruo ugbu a, anyị ahụla ihe ngosi nke ọhụụ HTC ọhụrụ, mana ugbu a, anyị na-ahụ ezigbo ihe oyiyi mbụ nke HTC One A9.
A na-edozi HTC One A9 na agba dị iche iche ma yie nke iPhone 6
HTC One A9 bụ ọnụ ebe HTC nwere olileanya kachasị. Ugbu a, anyị na-ahụ ya ka edere ya na ụdị agba ya niile na myirịta dị na iPhone 6.
HTC One A9 ga-abụ onye mbụ na-abụghị Nexus smartphone na gam akporo 6.0 Marshmallow
Selectedbọchị ahọrọ maka ọkwa nke HTC One A9 nke ga-abata na gam akporo 6.0 Marshmallow ga-abụ Septemba 29 mgbe a na-eweta Nexus.
HTC gosipụtara ọhụụ ọhụrụ, HTC Desire 728
Onye na-emepụta ihe ndị China ewepụtala HTC Desire 728 ọhụrụ na obodo ya, nke 5-anụ ọhịa asatọ nwere isi gam akporo.
HTC Aero yiri nnọọ ka iPhone 6
Ihe ọdịnihu nwere ike ịbụ nke onye nrụpụta China, HTC Aero, nwere ike inwe ụdịrị ụdị iPhone 6 dị ugbu a.
HTC O2, a ga-akpọ HTC flagship ọzọ na?
Site na nchapu, a ga - akpọ HTC flagship ọhụrụ HTC O2 ma debe aluminom maka ahụ nke ngwaọrụ ahụ.
Ihe ngosi nke layoffs na-agbadata HTC
HTC enweela atụmatụ nkwụsị iji belata ndị ọrụ ma chekwaa ụlọ ọrụ nwere ọdịnihu na-esighi ike.
Chọrọ ịzụta HTC One M9 dị ọnụ ala? On Ebay, ha na-ere ha ihe na-erughị euro 450
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ịzụta ọnụ ala HTC One M9 lee anya ọzọ: na Ebay ọ dị na euro 445
HTC wepụtara akwụkwọ akụkọ ego ọhụrụ. Gịnị bụ ihe ngwọta ya? ọgbọ ọhụrụ nke smartphones mara mma
HTC ahịa na-amalite ịbụ ihe ọjọọ. The Taiwanese emeputa nwere n'ime ọnwụ ruru 252 nde dollar.
HTC One M9 na One M8 ga-emelite na Android 5.1.1 Lollipop
The HTC One M9 na HTC One M8 ọnụ ga-emelitere na nsụgharị ọhụrụ nke dị ugbu a, Android 5.1.1 Lollipop n'oge na-adịghị anya.
HTC Desire 626 bịarutere Spain iji merie Moto G
Ebe ọhụụ ọhụrụ dị n'etiti etiti Taiwan, HTC Desire 626, ga-abata na Spain na ebumnuche nke ịlụ ọgụ megide Moto G.
A ga-emelite HTC One M8 na gam akporo M
Mo Versi kwadoro na HTC One M8 ga-enweta mmelite na gam akporo M. Date? na-atụ anya Jenụwarị ma ọ bụ February 2016
HTC Na-apụta Ya Ọzọ: Jiri iPhone 6 Were Foto Nkwado nke HTC One M9 Gold Edition
HTC na-agbakọta ya ọzọ site na iji foto nkwado nke 9-karat HTC # OneM24 na-eji iPhone 6. N'ezie, HTC?
Onyinye HTC riri uru ha kachasị dị ala
Ahịa HTC adaala uru dị ala ha ebe ọ bụ na edepụtara ya na Taiwan Stock Exchange. Ihe kpatara ya bu oke ahia nke ahia n’otu ubochi.
Ndị si Taiwan ewepụtala ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ ha, HTC One ME. Ngwọta nke ga-abụ nke izizi ịrịgo igwe ọhụrụ Helio X10.
[APK] Egwu !! Ibudata ma wụnye igwefoto mara mma nke HTC One M9 na arụmọrụ ya niile
Lee, ana m ahapụrụ gị igwefoto dị egwu na nke magburu onwe ya nke HTC One M9 ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ya na ụdị ndị ọzọ nke gam akporo ndị ọzọ na-abụghị HTC.
HTC One M9 na One M9 + ga-emelite na gam akporo M
The Taiwanese emeputa kemgbe mbụ emeputa gwa ya na ya HTC One M9 na One M9 + ga-emelitere gam akporo M mgbe ọ dị.
HTC One M10 ga-abata n'afọ a
HTC One M10 na-esote nwere ike ịdakwasị ahịa tupu njedebe nke afọ.
Esi gbanye gam akporo gị na HTC One M9
Tutorial ebe m na-egosi gị otu ị ga-esi gbanye gam akporo gị na HTC One M9
Eprel kacha njọ maka ahịa HTC nke afọ 6 gara aga
HTC egosiputa akwụkwọ nhazi nke na-egosi ogbenye nke ụlọ ọrụ ahụ.
HTC America na-akwado ọbịbịa nke mmelite na HTC One M9 nke ga-eme ka ogo foto dị mma na ọnọdụ niile
HTCmasị ndị HTC One M9 Plus? Ọfọn, ọ na-anọ n'ahịa Asia
HTC isi mmalite egosiwo na HTC One M9 Plus agaghị eru ahịa Europe ebe ọ bụ na ọ gbakwunyere Asia na ndị ọrụ China.
Ekwuputara HTC One M9 Plus na 5,2 ″ QuadHD Display, Duo Camera na Sensor Mkpisiaka
Ihe ọhụrụ HTC One M9 Plus bụ ekwentị buru ibu karịa Onye M9 ma nwee ihe mkpịsị aka mkpịsị aka dịka ihe pụrụ iche.
HTC One M10 nwere ike ịdị ka nke a?
Naanị ụbọchị ole na ole gara aga site na mbido ọrụ nke HTC One M9 na anyị ahụlarị na ntanetị dị iche iche echiche nke ihe HTC One M10 nwere ike ịbụ.
HTC na-aga n'ihu ịgbasawanye Ọchịchọ Ọchịchọ ya na HTC Desire 526G na HTC Desire 626G
Onye ọrụ ama ama ama ama ama ama na Taiwan nọ na-agbasawanye ụdị ihe atụ ya na HTC Desire 526G na HTC Desire 626G.
Ndị na-enye ihe ngosi nke HTC One E9 na-egosi njedebe dị n'ụdị ndị ọkà okwu One M8 na BoomSound
HTC One E9 nwere ike ịhụ dị ka HTC One M8 na onye bu ya ụzọ E8. Ọzọ nke dị elu nke ndị na-emepụta Taiwan maka afọ a
HTC One E9 +, kpughere eze
HTC ka eze n'ihu HTC One E9 +, ihe HTC One M9 na a mma na ihuenyo na plastic okokụre iji na Asia ahịa
Anyị na-egosi gị otu esi azụta HTC One M9 na Spain ọsọ ọsọ na mfe. Amazon na-enye gị ohere idobe ya maka euro 749!
HTC ghachiri HTC One M8 na HTC One M9
Kedu ihe ọdịda nke HTC na na mgbasa ozi na profaịlụ Facebook ha ha jiri HTC One M8 kwuo banyere HTC One M9
Foto ndị ọzọ nke HTC One M9 Plus, mana ha ekwughi na ọdụ a adịghị?
Ihe ngosi ohuru ohuru na egosi na HTC One M9 Plus di ma na, n’agbanyeghi, o gha agha itu ahia
Mba, HTC One M9 anaghịzi ekpo oke ọkụ. Ihe oyiyi a gosipụtara ya
Ihe onyonyo ohuru na-egosi na HTC One M9 anaghịzi enwe nsogbu oke oke ọkụ mgbe mmelite ahụ natara
A na-ewepụta nkọwa nke mbadamba HTC T1H nwere ihuenyo 8.9 and na 16MP igwefoto azụ
Onwa nke onwa dika nke ahoputara iji weputa HTC T1H tablet na ihe omume n’onwa Eprel 8 ebe a gha eweputa ya
Ẹma ẹdụk akpa mbụ oyiyi nke HTC One M9 Plus
A na-edozi ihe oyiyi mbụ nke HTC One M9 Plus, na mgbakwunye vidiyo nke na-egosi mockup nke ngwaọrụ
HTC One M9 dị ugbu a na Taiwan
Ugbu a ụmụ okorobịa nọ na HTC doziri nsogbu ahụ site na nwelite ngwanrọ, ha etinyeworị HTC One M9 na ire ere na Taiwan na ọnụahịa na-atọ ụtọ, ọ bụ ezie na anaghị atụ anya na ọ ga-abata na Spain na ihe na-erughị 749 euro.
OTA software maka HTC One M9 na-ebelata okpomọkụ ya site na ogo 15
Onye ọrụ XDA ekwuputala na HTC One M9 ya enwetala ngwanrọ ngwanrọ nke na-ebelata ọnọdụ okpomọkụ nke ọnụ site na ogo 15.
The HTC One M7 agaghị enweta gam akporo 5.1 ekele Google na HTC!
HTC ekwuputala na HTC One M7 agaghị enweta gam akporo 5.1. Ta dịịrị? Site na Google na mmelite ya oge niile iji dozie njehie na nchinchi.
The HTC One M9 overheats si ya software, ọ bụghị processor
Otu onye isi njikwa HTC ekwuola na nsogbu HTC One M9 na-ekpo oke ọkụ bụ ihe kpatara ngwanrọ ngwaọrụ.
HTC One M9 na-ekpo ọkụ nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ndị na-asọmpi ya
Ozi ojoo na-abiakute anyi maka HTC One M9 ma obu na, dika ufodu ule, onu ogugu di otutu ma e jiri ya tụnyere ngwaọrụ ndi ozo di otu.
Ọhịa HTC One M9 Plus pụtara!
A na - edozi ihe oyiyi ọhụrụ nke HTC One M9 Plus, ọnụ nke ga - apụta maka ihuenyo 2K ya na ihe mmetụta mkpịsị aka ya.
Otu HTC One M9, ya na Snapdragon 810 SoC, na-ekpo oke ọkụ na MWC
Otu HTC One M9 na Snapdragon 810 SoC n'oge MWC 2015 tara ahụhụ site na ikpo oke ọkụ. Nsogbu banyere Snapdragon 810?
European HTC One M7 na-anatarịrị gam akporo 5.0 L, nke nwere ibu nke 805 MB na ọnụọgụ abụọ nke Ihe Ekike
All atụmatụ na ngwa nke HTC One M9 na-leaked
Niile teknuzu e ji mara nke HTC One M9 e leaked na mgbakwunye na nke ngwa ga-eso ndị ọzọ HTC flagship
Ugbu a, ụmụ okorobịa si na ekwentị Designer site na ebe nrụọrụ weebụ ha, ebipụtala usoro nsụgharị nke gosipụtara nkọwa niile nke HTC One M9. Nke a ọ ga-abụ njirimara doro anya nke ọkọlọtọ HTC na-esote?
HTC One M7 anatalarị gam akporo 5.0
HTC One M7 na-anatarịrị gam akporo 5.0, yabụ n'izu sochirinụ, ị ga-enwe ike imelite ngwaọrụ gị site na OTA.
Nke a bụ ihe na - eme mgbe enyí rịgoro na HTC Desire Anya
Kedu ihe ị chere ga - eme ma ọ bụrụ na enyí arịgoro HTC Desire Anya? Ọgwụgwụ ahụ ọ ga-adịgide n'okpuru nnukwu nrụgide dị otú ahụ
A na-enyocha ụbọchị nke melite gam akporo 5.0 nke dum HTC nso
Datesbọchị nke ngwaọrụ HTC dakọtara ga-enweta mmelite echere ogologo oge na gam akporo 5.0 L abanyela.
HTC One M8 Onye Mmepụta Edition anatala gam akporo 5.0 L
HTC One M8 Onye Mmepụta Edition na-anatarịrị mmelite echere ogologo oge na gam akporo 5.0. Nke ahụ pụtara na n'oge na-adịghị anya, ha ga-ewepụta OTA maka otu onye na-emepụta Taiwan.
HTC Ọchịchọ 320, njedebe dị ala nke ga-apụta maka ọnụego mgbanwe ya
HTC egosila smartphone mbụ nke afọ: HTC Desire 320, ọnụ nke ga-agụnye ọkwa dịkarịsịrị ala na mpaghara ahụ.
[APK] Download na wụnye HTC gallery na gam akporo ọ bụla
Taa anyị na-ahapụrụ gị ngwa maka ntuziaka nwụnye na gam akporo ọ bụla, site na HTC gallery, a ikpọ n'ụzọ zuru ezu ọtọ gallery ngwa na ụdị ndị ọzọ nke gam akporo ọnụ.
Androidsis ọsọ ule: Nexus 6 VS HTC Ọchịchọ 816
Anyị na-aga n'ihu na nyocha ọsọ ọsọ nke Androidsis, oge a na-eche ihu onye pụrụ ime ihe nile Nexus 6 VS HTC Desire 816. Onye ga-emeri n'agha ahụ?.
HTC si RE Camera ugbu a maka ịzụta
Taa, etinyela igwefoto RE site na HTC, igwefoto niile nke ga - eso gị na njem gị niile.
HTC One Mini 2 bịarutere Spain
The HTC One Mini 2 ga-abata na Spain, ọnụahịa nke ewepụtara na njedebe nke ọnwa May mana nke were ihe karịrị ọnwa 6 iji rute na mba anyị.
HTC One M8 na M7 melite na ụbọchị 90 ka Android 5.0 Lollipop
HTC USA ka gosipụtara na akaụntụ Twitter ya na HTC One M8 na M7 ga-emelite na ụbọchị 90 gaa gam akporo 5.0 Lollipop
HTC na-ebipụta vidiyo ụfọdụ na-egosi ohere nke Ahụmịhe Anya
HTC ebipụtawo usoro vidio na-egosi uru nke Ahụmịhe Anya, ngwa ọhụrụ ya maka ụdị ọhụụ nke ndị nrụpụta
HTC One M8 vs HTC Ọchịchọ Anya
Taa, anyị na-ewetara gị ntụnyere n'etiti HTC One M8 na HTC Desire EYE, ndị ọrụ ugbu a nke ndị nrụpụta Taiwanese.
HTC na-ekpughe ọchịchọ anya ya na 13MP Front Selfie Camera
HTC Desire EYE ekpughere ụnyaahụ site na New York City na ihe omume. Ekwentị selfie zuru oke.
HTC One M8 Anya na HTC Ọchịchọ Anya Ahịa Leaked
HTC ga - ewebata HTC Ọchịchọ Anya na HTC One M8 Anya ma anyị amatalarị ọnụ ahịa ha
New oyiyi nke HTC Ọchịchọ Anya e leaked ikwado ya 13-megapixel n'ihu igwefoto
Ihe nkiri vidio mbụ nke HTC Desire 820
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke HTC Desire 820, smartphone ọhụụ sitere n'aka ndị na-emepụta Taiwan na ihe nhazi 64-bit
HTC One M7 na-enweta Android 4.4.3 na Europe
Ọ bụrụ na ị nwere HTC One M7 ị nwere ike ịnwelarị njikere imelite ya na gam akporo 4.4.3 na akụkụ nke nchedo nchedo nke gam akporo 4.4.4 nwere
Nnwale ule siri ike: HTC One M8
Gịnị ma ọ bụrụ na anyị etinye HTC One M8, spana, ihe na-edozi anụ na hama na ebe a na-edekọ egwu? azịza ya na vidio dị na peeji nke.
Ọzọ m kọwaa otu ị kpọghee HTC One M8 n'efu na mgbakwunye na usoro S-OFF nke dị mkpa iji mepee netwọk ahụ.
HTC iji malite ụdị dịgasị iche iche nke Otu M8: "Plus" nke mmiri na "Ọganihu" na nkedo plastik
Dị abụọ nke Onye M8 ka a tọhapụrụ, otu nwere nguzo mmiri na nke ọzọ na casing plastic
Samsung Galaxy S5 VS HTC One M8: Nnwale Ọsọ
Anyị na-eche ihu na ọsọ ọsọ nwalee Samsung Galaxy S5 VS HTC One M8 na vidiyo ka ị wee nweta nsonaazụ gị.
Kedu ihe igwefoto dị na HTC One M8 nwere ike? N'okpuru azịza ya
Naanị ihe anyị nwere ike ime bụ iwepu okpu anyị na njiri mara igwefoto igwefoto HTC One M8 na njide ndị IMGUR were.
Ọzọ m kọwapụtara otu esi enweta mgbọrọgwụ na HTC One M8 na M7 ọhụrụ n'ụzọ dị oke mfe.
HTC gosipụtarala HTC One M8 ọhụrụ, ọnụ ya na atụmatụ ya yana atụmatụ ya mara mma.
HTC gosipụtara HTC One M8 ọhụrụ na ihuenyo 5,, Snapdragon 801 mgbawa, igwefoto abụọ, microSD na imepụta ígwè.
E gosipụtara HTC One M8 ọhụrụ n'oge na-adịbeghị anya na mgbape Snapdragon 801, ihuenyo 5-inch, igwefoto abụọ na ahụ igwe.
Lee, ana m ahapụrụ gị ekele na nnọkọ XDA bụ ngwa nke ụlọ nke HTC, HTC Music mkpuchi iji wụnye gam akporo ọ bụla.
HTC M8 ga-enwekwa smart ikpe
evleaks ka kpochara katalọgụ nke okwu ikpe dị maka HTC M8 ọhụrụ.
The HTC One X agaghị enweta ihe ọ bụla ọzọ ukara gam akporo mmelite
Ihe nchoputa nke 2012 nke ụlọ ọrụ Taiwanese, HTC One X, agakwaghị enweta mmelite ọ bụla gam akporo.
Android 4.4 KitKat na-arụ ọrụ na smartphone dị afọ 4 dịka HTC HD2
Android 4.4 KitKat na-agba ọsọ na 4 afọ dị ka HTC HD2 bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na mkpụrụ nke ọrụ Google mere na gam akporo.
Ọgba aghara na HTC: layoffs, nsogbu nrụpụta na Nke mbụ ịbụ ọdachi
Ọpụpụ na-aga n'ihu nke ndị njikwa na ndị isi nke ụlọ ọrụ Taiwanese na-eme ka ọdịnihu dị nro, ọbụlagodi na nnukwu ọdụdụ dị ka HTC One X
iFixit, weebụsaịtị weputara iche na ekwentị, ekpebie imepe HTC One ohuru ma nsonaazụ ya apughi njọ:
MWC 2013, video nke HTC otu
Ebe ọ bụ na MWC 2013 na HTC satand anyị enweela ike ịnwale ọhụụ kachasị ọhụrụ site na ụlọ Taiwanese, nke HTC.
HTC One ma ọ bụ Nexus 4 nke ka mma?
N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ Taiwanese kwalitere HTC One, maka ọnụahịa ya ọ ga-asọmpi ya na Google nke Nexus 4, kedu nke na-apụta na-emeri?
HTC na-akwadebe obere ekwentị dị ka ngwa
Onye na-emepụta Taiwan nke HTC na-ebupụta obere ngwaọrụ iji jikwaa ama ahụ, ọrụ a malitere site na ụdị na China
HTC na ndepụta nke mobiles 2013, olee ngwaọrụ anyị maara?
E depụtara ndepụta ahụ na HTC mobiles maka 2013, ụdị ọhụrụ na ụfọdụ amaworị mara nke gosipụtara dị ka mmalite nke afọ a nke ga-amalite.
HTC Ọchịchọ S, Rom BlindBean v1.5 Jelii agwa AOKP
Ntụle dị mfe ma zuru ezu iji wụnye rom esiri esi na HTC Desire S ma melite ya na gam akporo 4.1.1 jelii agwa
Mepụta GoldCard na ngwaọrụ HTC
Ntụziaka dị mfe nke Fosco de HTCmania iji mepụta GoldCard maka ngwaọrụ HTC.
Jelly Bean mara ọkwa maka HTC One igwe
HTC ekwenyela na ha na-akwado ịhapụ Android 4.1 jelii agwa dị iche iche HTC One usoro igwe.
Ntuziaka Ntuziaka HTCdev
Ntuziaka bara uru banyere otu esi eji weebụsaịtị HTCdev, nke ị nwere ike ị kpọghee bootloader nke ezigbo ọnụọgụ HTC.
HTC Ọchịchọ, wụnye Android 4.03 na Fallout rom
Kporie ụdị nke gam akporo kacha ọhụrụ na HTC Desire, ụzọ iji mee ka ọtụtụ ikike nke ama ama ama ama ama ama nke Taiwan
Etu ị ga-esi kpọghee bootloader nke ọnụ ọgụgụ dị mma nke HTC na HTCDev
HTCdev bụ ibe weebụ nke mgbe ị debanyere aha, anyị nwere ike ibudata ngwaọrụ ndị dị mkpa iji kpọghee bootloader.
New HTC Ville C, ụdị akụ na ụba nke Onye S
Nkọwa nke HTC Ville C, ụdị dị ọnụ ala karịa nke HTC One S, yana ihuenyo 4.3 na nke ebughibu.
HTC ga-agụnye LogMeIn Nnapụta na ngwaọrụ gam akporo ya niile
HTC nwere ike ịgụnye LogMein na ngwaọrụ gam akporo ya niile, na ntọhapụ nke HTC chọrọ iji chọpụta nsogbu na ngwa ahụ.
HTC unlocks Wildfire, Wildfire S, na Desire bootloader.
HTC na-emelite ndepụta nke ekwentị dakọtara na mkpọchi bootloader a ma ama, ugbu a HTC Wildfire, Wildfire S na Ọchịchọ nwere ike ịnụ ụtọ ịnweta mgbọrọgwụ.
Nwere ike mepee HTC Sensation
HTC nwere ihe na-adọrọ mmasị na ndị ọrụ site na ikwalite mkpọchi nke bootloader nke ngwaọrụ ha niile….
Ule nke HTC ChaChaCha (III)
Akụkụ nke atọ na nke ikpeazụ nke nyocha nke njedebe HTC. Mgbe akụkụ mbụ ebe anyị nyochachara ngwaike na ...
Ule nke HTC ChaChaCha (II)
Akụkụ nke abụọ nke HTC ChaChaCha Review
HTC Mmetụta Vs LG Optimus 2x
N'iji tụnyere LG Optimus 2x na HTC Sensation
HTC Sensation (III) ule
Akụkụ nke atọ nke HTC Sensation nyochaa
Anyị nwalere HTC Wildfire S (III)
Akụkụ nke atọ nke HTC Wildfire S ule
Mgbọrọgwụ nke HTC Thunderbolt na 1 pịa
Mgbọrọgwụ na HTC Thunderbolt na 1 pịa
Unlock HTC Ọchịchọ gị n'efu!
Hapụ HTC Ọchịchọ na kọmputa gị na USB
Htc Thunderbolt ọkọnọ, a Ọchịchọ HD na n'ihu igwefoto
E mechara gosipụta Htc Thunderbolt ọ bụ ezie na ọ na-agụnye obere akwụkwọ akụkọ ọhụụ anyị na-amatabeghị. ihu ọma ọ bụ Ọchịchọ HD na igwefoto n'ihu.
Htc Evo Mgbanwe 4G, a ọhụrụ gam akporo na a nkịtị keyboard na-ọkọnọ
Sprint ewetala ihe ọhụrụ gam akporo 4G ya, Htc Evo Shift, nke na-etinye ihe eji eme ihe eji eme ihe.
Tutorial ịzọpụta njehie mgbe wụnye rom nke Froyo na mgbọrọgwụ na Htc Akụkọ Mgbe Ochie
Wantchọrọ ịwụnye rom na ikikere mgbọrọgwụ na Htc Legend mgbe ị kwalitechara na Froyo? ebe a ị nwere ihe ngwọta